WinSxS सफाई। WinSxS फोल्डर कसरी सफा गर्ने?
छैन लामो पहिले, पीसी घर को बहुमत हार्ड ड्राइव सुसज्जित थिए, मात्रा धेरै टाढा महाकाव्य हटाइएको थियो। विशेष, यो 30GB हार्ड ड्राइभ, वा कम संग एक मिसिन मा अक्सर पाउन सकिन्छ।
निस्सन्देह, जबकि संघर्ष लगभग निःशुल्क हार्ड डिस्क स्पेस हरेक megabyte लागि थियो। यस वर्ष बित्यो रूपमा, भण्डारण मिडिया आकार बिस्तारै वृद्धि भएको छ। आज यो असामान्य छैन मा-बोर्ड र त्यसैले व्यावहारिक उपस्थित छैन मुक्त प्रयोगकर्ता स्पेस कमी बारेमा चासो को एक वा दुई टेराबाइट्स संग घर पीसी छ।
तर, यो सबै प्रयोगकर्तालाई लागू हुँदैन। उदाहरणका लागि, तिनीहरूलाई केही WinSxS सफा गर्न बाँकी दिन छैन। कि गरयो के हो? यो - प्रणाली फोल्डर जसको आकार अक्सर कम्प्युटर फोरम छलफलमा कारण को नाम।
उन्नत प्रयोगकर्ताहरूको लागि, यो खराब निर्देशिका लगातार बढ्न अप्रिय सम्पत्ति छ भन्ने तथ्यलाई द्वारा तर्साउने छ। र उहाँले तपाईं आफ्नो कम्प्युटर कुनै पनि सफ्टवेयर स्थापना छैन भने पनि, यो गर्छ!
यो "चमत्कार-फोल्डर" को आकार जीबी को धेरै दसौं लुढका कि हुन्छ। यस मामला मा, अनुभवहीन प्रयोगकर्ता नस्ल भाइरस पाप मा, प्रणाली पुन सुरु, र तिनीहरूको मन फेरि पूर्णतया सही सफाई WinSxS अवशोषित गर्न सुरु थप erudite सहयोगिहरु थिए।
हामी रोक्नु पर्दछ र निम्न स्थानमा स्थित छ जो निर्देशिका, उद्देश्य व्याख्या: सी: \_ Windows \_ winsxs। यो सेवामा यदि आवश्यक गर्न सक्छन् चाँडै OBLIVION देखि पुनर्स्थापित जो आफ्नो फाइलहरू, केही पुरानो संस्करण राख्न परिवारको विन्डोज फोल्डर।
किन निरन्तर बढ्दै छ?
धेरै साईट प्रयोगकर्ता एक स्थिर misconception छ फोल्डरमा यो तुरुन्तै सिस्टम को स्थापना पछि खाली डिस्क स्थान को विशाल chunks बन्द स्न्याप सुरु हुन्छ। सुदूर यसलाई देखि।
संग, सूची गुण निर्दिष्ट आकार सुरु गर्न, वास्तविक अवस्था के गर्न धेरै छैन। मनमा राख्न सबै अन्य स्थानहरूमा मा स्थित मानिन्छ वास्तवमा, यो निर्देशिका छन् भनेर फाइलहरू, धेरै। आफ्नो आवाज मात्र किनभने एक्सप्लोरर मा "हार्ड" लिंक को खातामा लिइएको छ।
तुरुन्त विशेष enterprising नागरिकहरु यस्तो चेतावनी दिनुभयो: प्रदर्शन मोड को लुकेका फाइलहरू समावेश छैन, र त्यसपछि स्वयं फोल्डर को सम्पूर्ण सामग्रीहरू मेटाउन। हो, ठाउँ खाली बिट, तपाईं साँच्चै पाउन, तर केवल आफ्नो आनन्द छ धेरै छोटो-बस्ने हुन सक्छ। सिस्टम चाँडै यस्तो खिसी गर्न प्रतिक्रिया, तर किनभने चाँडै सबै कम्प्युटरमा काम नीलो स्क्रिनमा स्थिर असफलता र प्रस्थान द्वारा marred गरिनेछ।
त्यहाँ जो WinSxS सफाई पूर्ण नतिजा बिना सकिन्छ धेरै सुरक्षित तरिकाहरू छन्। यस लेखमा हामी तिनीहरूलाई छलफल गरिनेछ।
हाल सम्म, द्वारा सञ्चालन प्रणाली प्रयोगकर्ता माइक्रोसफ्ट कर्प छैन पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कार्य बल्ल सिस्टम मा सिधै शुरू गरिनेछ भन्ने तथ्यलाई विचार सकेन। सबै "सात" मा "पैच" SP1 एक सेट को उपस्थिति पछि परिवर्तन भयो।
अपेक्षाकृत हालै, अक्टोबर 8, 2013, को माइक्रोसफ्ट यसको प्रयोगकर्ता प्रणाली सूची को नियमित सफाई को संभावना थपियो जो KB2852386, अद्यावधिक खुसी। तपाईं स्वचालित जम्प सक्षम र अद्यावधिक स्थापना गर्नुभएको छ भने, त्यसपछि यो शायद तपाईंको सिस्टम छ।
को सफाई प्रक्रिया सुरु
यो ह्यान्डल पनि सबैभन्दा अनुभवहीन प्रयोगकर्ता संग। पहिलो, को विन्डो खोल्न "मेरो कम्प्युटर।" त्यसपछि तपाईं शर्टकट मेनु "गुण" चयन गर्नुहोस्, दायाँ माउस बटन प्रणाली ड्राइभमा क्लिक गर्न त संवाद बक्स मा "सामान्य" ट्याबमा जानुहोस् आवश्यक छ।
तल "डिस्क क्लिनअप" बटन छ, र तपाईं थिच्नुहोस्। यो उपयोगिता विन्डो, सबै सञ्चालनहरू पछि जारी गर्न सकिन्छ भनेर डिस्क स्पेस राशि को विश्लेषण केही समय खर्च हुनेछ जो सुरु हुन्छ। अर्को संवाद बक्स खुल्नेछ यी विश्लेषण को परिणामहरू familiarize गर्न।
के तपाईं "सफा प्रणाली फाइलहरू" भर्खर साफ गर्न सकिन्छ कि सबै सिस्टम स्रोतहरू सूची तल स्थित छ जो बटन, इच्छुक हुनुपर्छ। यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, पप-अप UAC विन्डो मा "ठीक" बटन क्लिक गरेर आफ्नो कार्यहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ।
फेरि, पछि जो अर्को विन्डो पुन: देखिन्छ, विश्लेषण चलाउनुहोस्। यो तपाईं अन्तमा "ठीक", त्यसपछि WinSxS सफाई पूर्ण बटन poke गर्न सक्षम हुनेछ।
त्यहाँ जो प्रदर्शन प्रशासक रूपमा आदेश लाइन emulator चलिरहेको प्रयोग गर्न आवश्यक हुनेछ अर्को तरिका हो। कसरी यसलाई के गर्ने?
पहिलो, "सुरुवात" बटन क्लिक गर्नुहोस् देखिन्छ कि मेनुमा "खोज" वस्तु खोज्न। यस क्षेत्र मा, एक शब्द सीएमडी संग मुद्रित, र एउटै नाम को एक फाइल हो त्यसपछि काम सञ्झ्यालको दायाँ छेउमा। यसमा RMB क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि "रन प्रशासक रूपमा" चयन प्रसङ्ग मेनु बाट।
के अर्को के गर्ने?
उच्च विशेषाधिकार संग चलिरहेको, टर्मिनल सञ्झ्याल खोल्नुहोस्। प्रतिलिपि र cleanmgr गर्न आदेश पेस्ट, दर्ज थिच्नुहोस्। फेरि सिस्टम ड्राइव चयन गर्न, र त्यसपछि «ठीक» बटन क्लिक गर्नुहोस् ड्रप-डाउन सूचीमा WinSxS फोल्डर सफाई को लागि एक कार्यक्रम थियो। यस पछि पहिलो शुद्धीकरण विधि मा वर्णन थियो नै सञ्चालन सञ्चालन गर्छन्।
हामी तपाईंलाई अनुच्छेद लागि बाहेक सबै चेक बक्स, हटाउन सुझाव "सफाई विन्डोज अद्यावधिक गर्नुहोस्।" फेरि एक पटक, सबै चेक, र त्यसपछि «ठीक» बटन थिच्नुहोस्। त्यसपछि WinSxS फोल्डर मेटिनेछ। सफाई Windows7यो बिन्दु गरेपछि पुनः सुरु गर्न सिस्टम पठाउन निश्चित हो कि सुझाव।
त्यसपछि तपाईं फेरि "मेरो कम्प्युटर" मा प्राप्त गर्न सक्छन् र कति ठाउँ खाली मूल्याङ्कन गर्न। हामी पहिले नै भनेका छन् र, विशेष गम्भीर अवस्थामा फरक धेरै, धेरै महत्वपूर्ण हुन सक्छ।
विन्डोज 8 / 8.1 वा सफाई स्वचालन को लाभ मा
त्यो सुरुमा थियो "आठ" तुरुन्तै यसको रिलिज पछि, महत्वपूर्ण लाभ befell सबै आलोचना बावजुद। त्यसैले, पुरानो अद्यावधिक मेटाउन क्षमता, त्यहाँ सधैं, माइक्रोसफ्टका नयाँ प्रणाली को प्रयोगकर्ता WinSxS फोल्डर सफाई आवश्यक छैन भनेर थियो। तपाईं पनि केहि कन्फिगर छैन त्यसैले यस सन्दर्भमा विन्डोज 8, पूर्ण स्वचालित छ।
"सात" केहि समान सेट अप मा पनि एकदम वास्तविक हो। त्यसैले तपाईंले एक स्वचालित सफाई WinSxS फोल्डर, विन्डोज7छ, तपाईंले प्रशासक खातामा सकिएको गर्न आवश्यक छ। साथै, एक टर्मिनलइमुलेटर प्रवेश गर्न आवश्यकता आदेश शीघ्र उच्च विशेषाधिकार संग।
हामी प्रविधि माथि विस्तृत वर्णन गरेका छन्। तपाईं अगाडि टर्मिनल सञ्झ्याल हुनेछ, यो निम्न लाइन प्रतिलिपि गर्नुपर्छ: schtasks / सिर्जना गर्नुहोस् / तमिलनाडु CleanupWinSxS / आर एल उच्चतम / अनुसूचित जाति मासिक / tr "cleanmgr / sagerun: 88"। तपाईं त प्रविष्ट गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस्।
अब देखि, प्रत्येक महिनाको सुरुमा, फोल्डर स्वचालित रूपमा जंक बाहिर साफ गरिनेछ। तपाईं कार्यान्वयन को समय समायोजन गर्न "सुरुवात" बटन क्लिक गर्नुहोस्, त्यहाँ फेला को "रन" र त्यसपछि taskschd.msc गर्न आदेश प्रविष्ट गर्नुहोस् चाहनुहुन्छ भने।
को "Windows कार्यअनुसूचक", जहाँ तपाईं सबै आवश्यक मापदण्डहरू समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ WinSxS देखि पुरानो फाइलहरू हटाउन। सफा विन्डोज 8 / 8.1 आवश्यक छैन! फेरि हामी बासी अद्यावधिक स्वचालित तरिका therefrom हटाइएका छन् कि सम्झाउने।
यो उपचार त कसरी जायज छ?
फेरि, यो कल्पित छ कि हार्ड डिस्क को कुनै पनि सफाई - एउटा सञ्चालनको परिभाषा द्वारा उपयोगी। सुदूर यसलाई देखि। यो विशेष गरी साँचो WinSxS फोल्डर फाइलहरू मेट्न छ। सफा विन्डोज7शुरुआती अक्सर तथ्यलाई समाप्त कम्प्युटर बिल्कुल असम्भव हुन्छ आफ्नो सिस्टम पूर्ण स्थिरता अन्तिम remnants कुरा गर्न गुमाए, र त्यसपछि छ।
हामी पहिले नै यो निर्देशिका धेरै फाइलहरू पुरानो संस्करण भण्डारण गरिएको छ भन्ने तथ्यलाई बारेमा कुरा गरेका छन्। के विशेष? यसलाई सरल छ। सिस्टम आफ्नो स्थापना को फलस्वरूप परिवर्तन गरिएका छन् भन्ने अद्यावधिक र प्रणाली फाइलहरू पुरानो "को स्टोर"।
यसलाई जहाँ केही प्याच परेशान गरिनेछ मामला मा, तपाईं सजिलै फिर्ता राज्य सबै अरू राम्रो काम गर्दा रोल गर्न सक्ने वहन गर्न सजिलो छ। यी फाइलहरू भण्डारण पूर्ण सफा बह गरिनेछ भने, यो अब हुन्छ के। तदनुसार, तपाईं वा Microsoft को द्वारा एक औपचारिक निर्णय प्रतीक्षा गर्न, वा प्रणाली पुन छन्।
दुवै अवस्थामा, तपाईंले आफ्नो समय र पैसा बर्बाद छन्। आधुनिक हार्ड ड्राइव जानकारी टेराबाइट्स भण्डारण गर्न सकिँदैन, कि त crumbs ठाउँ जोशिलो संघर्ष यसको अर्थ हराउछ दिइएको।
तपाईं WinSxS फाइलहरू मेट्न अघि सबै सिस्टम घटक, काम पूर्ण भएको "वक्र" पैच र अद्यावधिक कारण कुनै ग्लिचहरू र दुर्घटनाहरू कि डबल र ट्रिपल चेक (Windows 2008 र अन्य सर्भर प्रणाली थप जिम्मेवार सफाई)।
विशेष, माईक्रोसफ्ट देखि अपेक्षाकृत नयाँ प्रयोगकर्ता पनि पूर्ण कानुनी प्रणाली नयाँ अद्यावधिक नसक्नुको आफ्नो कम्प्युटरमा स्थापित गरिएको छ कि लगभग सबै आवेदन चलाउन कारण भन्ने तथ्यलाई सामना गर्दै हुनुहुन्छ।
तपाईं अन्त सफाई को लागि आवश्यकता मा निर्णय भने पनि पछिल्लो उत्पादन पैच माइक्रोसफ्ट पछि सप्ताह कम्तिमा एक जोडी प्रतीक्षा गर्न निश्चित हुन। यस मामला मा, कम्तिमा तपाईं सिस्टम को सामान्य संचालन भरोसा हुनेछ।
पार सिलाई लागि कार्यक्रम। मिसिन कढाई
कसरी PSP मा खेल स्थापना गर्न: शुरुआती लागि निर्देशन
"इन्स्टाग्राम" - छ र कसरी प्रयोग गर्ने? "इन्स्टाग्राम" कसरी हटाउने? को "इन्स्टाग्राम" कसरी प्रयोग गर्ने विस्तृत निर्देशनहरू
रातो borscht - नुस्खा
सजावटी प्यानल - सहायक तत्व
बाइक खेल: सुविधा र खेल बाइक को प्रकार